ATM 2021: NH Dubai iyo Palm kuvhura gore rino
NH Mahotera ndeyekutanga kuMiddle East gare gare gore rino nekumisikidzwa kweNH Dubai iyo Palm. Parizvino mumatanho ekupedzisira ebudiriro, iyo nyowani-inovaka 533-kiyi chivakwa ichavhura madhoo ayo muna Zvita. Iri paDubai's Palm Jumeirah, chinzvimbo chepasirese, NH Dubai iyo Palm ichave chikamu cheSeve ...
Atlantis, iyo Palm inotangisa zviwanikwa zvitsva zvevatengesi
Atlantis, Dubai iri kutsigira vezvekutengeserana kupfuura nakare kose, nenzvimbo dzekugara 'dzekutanga dzakatsaurwa online sosi peji. Yakagadzirwa chete yevashambadzi vekushambadzira vafambidzani, chikuva chinopa chakakura kupa kwetekiti, mabrochure neruzivo runobatsira, zvese zviripo pasi ...
Hotera Micro Zororo inova Mainstream
ne admin pane 21-05-24
Kunyangwe hazvo musika wehotera urikuramba uchidzoka, nekuda kwekudzikiswa kwekushanyirwa kwebhizinesi repasi rese, mashandiro emapoka emahotera epasi rose muChina haagutsikane. Naizvozvo, hofori mahotera ari kugara achiongorora kuti akurumidze kudzoka kwekuita kwehotera. Aihwa...
Chii Chandinofanira Kutarisisa Kana Ndichishandisa Bvudzi Rinomesa
ne admin pane 21-05-21
Kana iwe uchida kuwedzera hupenyu hwebasa rebasa rinoomesa bvudzi, unofanirwa kuzvichengeta uye kugona nzira chaiyo yekushandisa Saka, sei kushandisa bvudzi rako rakaomesa zvakanaka? Chii chandinofanira kutarisisa kana ndichishandisa chinomesa bvudzi? 1.Connect the power supply kutanga, wobva wabatidza switch. Vamwe vanhu vane zvakaipa ...
BTG Hotel Boka Zvirongwa Zvekuvhura 1,400-1600 Hotel Chains muna 2021
ne admin pane 21-05-19
Musi waMay 10th, Beijing BTG Hotels (Boka) Co, Ltd. yakaita musangano wekutsinhana pamhepo nezve 2020 yegore kuita uye ne2020 chirongwa chekuparadzira purofiti. Sun Jian, director uye general maneja, Li Xiangrong, mutevedzeri mukuru maneja uye mukuru wezvemari uye Duan Zhongpeng, mutevedzeri mukuru manag ...
Iyo Homestay yakasimudzira 100 Bhirioni Race Rwendo
Sekureva kwedata kubva pakutsvaga kwebhizinesi, huwandu hwekunyoresa hwemabhizinesi ekushanya mune yekutanga Kubvumbi ya2021 yakawedzera zvakanyanya, iine gore-gore-gore kuwedzera kwe273%. Pakati pavo, yakawedzera 220% gore-ne-gore muna Ndira gore rino, uye kunyoreswa kwaive kakapetwa ka9 keye t ...